Blockchain Izindaba 26 Januwari 2018 - Blockchain Izindaba
BitGo ukuthola inkampani ithemba elawulwayo ngokugcwele kuka $ 12b e amafa
BitGo, umholi digital lwemali yokuphepha solutions zimali zezikhungo, wamemezela ukuthi uye wangena esivumelwaneni esichazayo ukuthola Kingdom Trust Company, a South Dakota – inkampani ithemba elawulwayo ngokugcwele phezu $12 billion ngonyaka amafa. Okwenziwayo namanje kuncike kwimibandela lokuvala wesintfu ukulawulwa.
"Izimakethe zezimali Global Ngiyilangazelele ekupheleni-to-ekupheleni isixazululo umnikelo kokubili ubuchwepheshe ukuze uvikele zezimali digital kanye zomthetho nokulandela elawula kunesidingo ukuhlanganisa amaphothifoliyo kuqhakanjiswe zezimali"
Kingdom Trust elihlangabezana nazo zonke izidingo ezifanele of Internal Revenue Code 408 ukukhonza njengephayona umgcini afanelekayo njengombana kuhlathululiwe kumThetho-Investment Abeluleki Isenzo 1940. Amasevisi umnakekeli ezihlinzekwa inkampani ithemba, eceleni isofthiwe BitGo sika lwemali digital ukuvikeleka, uzokwenza izinkampani kuhlangene kuphela esigcwele isitaki, ngesikalo umhlinzeki Ukuvikelwa akusayithi nangaphandle online for digital lwemali ukutshalwa aphethwe zimali zezikhungo.
“BitGo noMbuso oyakhayo imikhiqizo Ngokuzayo – eshada ubuchwepheshe obusha ne ukuphepha nezilawuli bonke abatshali-zimali zidinga.”
Kazakhstan nokulingwa ukukhokha amathikithi omgwaqo nge Bitcoin
Kazakhstan owenza akwazi ukukhokhela amathikithi omgwaqo nge cryptocurrency. Isicelo mobile futhi inkonzo OKauto.kz isivele ihlolwe ngempumelelo ngomunye abadali isicelo – Ali Shaykhislam. Nokho, abalobi inkonzo ukugcizelela ukuthi umsebenzi omusha sizaboniswa ikumodi test.
I Abadali waqaphela ukuthi kungenzeka ukukhokha inhlawulo uhulumeni ngenxa yokwephula imithetho yomgwaqo ku cryptocurrency of bitcoin.
Lena lokusebenza khulula esihlinzeka inkonzo yokuqinisekisa kanye izaziso nenhlawulo ekhishwe, phakathi kwezinye izinto.
Kuyaphawuleka ukuthi akukho isimo olusemthethweni cryptocurrencies e Kazakhstan, kungukuthi kubhekwa imali noma kwezezimali.
cryptocurrency Russian bill ezihlongozwayo
I-Russian Ministry of Finance eshicilelwe bill “On Digital lwezezimali Amafa”, esiklanyelwe bagunyaze cryptocurrencies eRussia.
Ministry of Finance libhekisela amafa digital zezimali njengoba “impahla elektroniki, wadala kusetshenziswa ukubethela (cryptographic) kusho.”
Ungashintshanisa amathokheni ukuze uthole enye i cryptocurrency noma ruble kuphela ngokusebenzisa Ukuhwebelana ekhethekile – “exchange opharetha kwempahla digital zezimali”.
Kuphela inhlangano yawo ibe esemthethweni bhalisiwe e-Russia, futhi sigcina imithetho Cha. 39-FZ “On izibambiso emakethe” noma Cha. 325-FZ “On abathengisa ihlelwe” bangaba mqhubi.
Inqubo ukuvulwa kanye nokugcina akhawunti kufanele isungulwe Central Bank.
Umlawuli ufuna ukuthenga kuphela amathokheni ukuthi izinkampani zisebenzisa ukukhulisa imali ruble, uxwayisa Ministry of Finance.
Inkonzo ukholelwa ngokuqinile ukuthi akunakwenzeka ukuba iyakwenqabela ukuthengwa kokujwayelekile cryptocurrency, ngoba uma kungenjalo ezingekho emthethweni intando ibhizinisi “hambisa” kule makethe.
Futhi kule dokhumenti kukhona izincazelo izinkontileka smart nezimayini, okuyinto kubhekwa umsebenzi ebhizinisi ngoba ukudalwa noma ukuqinisekisa of cryptocurrency esenana isinxephezelo. Yiziphi izintela eyokhokhwa imisebenzi yabavukuzi, ayicacisiwe.
Uma idokhumenti sihamba ukufundwa amathathu Duma State, futhi uthola imvume Federation Council kanye nesiginesha umengameli Russian, ke sizovulwa 90 izinsuku ngemuva yanyatheliswa olusemthethweni. Lo mthethosivivinywa ingashintshwa ngesikhatsi sekucoca kuleli ephalamende.
Thumela Previous:Sezibalo ibalwa intengo bitcoin ngoba 2018
Thumela Landelayo:Chainalysis – inkampani owabhubhisa yokufihla Bitcoin